बजारमा माग बढ्दा सेयर बजारको पहिरो थामियो, कारोबार रकममा भने अझै देखिएन उत्साह « Bizkhabar Online
21 September, 2021 3:25 pm
काठमाडौं । केही दिनयता सयर बजारमा आएको निरन्तरको गिरावटको क्रम मंगलबार रोकिएको छ । सोमबार नेप्सेमा ११४.०२ अंकले गिरावट आएको सेयर बजार मंगलबार सम्हालिदैं १३.८३ अंकले बढेर बन्द भएको हो । बिहानैदेखि निरन्तर उकालो लागेको बजार अन्तिम समयमा भने झिनो अंकले बढेर परिसूचक २७१२.०२ अंक पुगेको छ । सोमबार नेप्से २६९८.२४ विन्दुमा पुगेको थियो । सोमबार नेप्से ०.५१ प्रतिशतले बढेको छ भने सेन्सेटिभ परिसूचक २.३६ अंकले बढेर ५०८.६२ विन्दुमा पुगेको छ ।
निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारमा मंगलबार क्रेता हावी भएसँगै बजारमा सुधार आएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि तथा लगानीयोग्य रकम अभावमा सेयर बजार घटने त्रासबीच लगानीकर्ताले प्यानिक सेल गर्दा नेप्सेमा ठूलो गिरावट आएको आँकलन गरिएको छ । तर, सोमबार ५ अर्बसम्म झरेको कारोबार रकममा आएको सुधारले सेयर बजारमा पुनः सुधारको संकेत देखिएको थियो । सोमबार बजार ११४ अंकले घटेपनि कारोबार रकममा सुधार आउँदैं ८ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख एक हजार ९ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । मंगलबार भने बजार बढेपनि कारोबार रकम भने केही खुम्चदैं ७ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ९८ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
मंगलबार कारोबारमा आएका कूल २२३ वटा कम्पनीको एक करोड ५३ लाख ६ हजार ६१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ९८ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये ९ वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी ४ वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ । मंगलबार पनि अरूण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो ।
यस दिन मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ । सोमबार सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ भने सबैभन्दा बढी फाइनान्सको शेयर ८.५६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै हाइड्रोपावर र विकास बैंकको शेयरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको छ ।
त्यसैगरी लगानी र जीवन बीमा उपसूचक समुहको शेयरमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको गिरावट आएको छ भने होटल तथा पर्यटन, निर्जीव वीमा र ट्रेडिङ उपसूचकको शेयर ४ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ । त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स , म्युचुअल फण्ड र अन्य समुहको शेयर ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
त्यसैगरी सोमबार मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मुल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ भने सात कम्पनीको शेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
त्यस्तै सोमबार अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको ४० करोडभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ भने हिमालयन डिष्टिलरीको २२ करोडको शेयर कारोबार भएको छ ।
डेट एक्स्पायर लेज कुर्कुरेमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाइँदैं, गोल्डेन नेपाल सप्लायर्स टोखामा छापा
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गोल्डेन नेपाल सप्लायर्स टोखा–५ लाई कारबाही गरेको छ ।
सेयर बजारमा बाउन्स ब्याक कि सेयर बिक्री गर्ने अवसर ? यस्तो छ लगानीकर्ताको धारणा !
काठमाडौं । यो साता सेयर बजार तेस्रो दिनसम्म लगातार उच्च अंकले बढ्न पुगेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको निर्देशन, भन्यो-शेयरधनीको बैंक खातामा नगद लाभांश पठाउँदा सबै विवरण खुलाउनु
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश प्रदान गर्दा सबै विवरण स्पष्ट
काठमाडौँमा एस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन शुरु, यसरी लगाउन सकिन्छ खोप
काठमाडौँ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौँले आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन